8 Isbeddellada Teknolojiyadda Tafaariiqda Tafaariiqda | Martech Zone
Warshadaha tafaariiqdu waa warshad aad u weyn oo qabata hawlo iyo hawlo badan. Qoraalkan, waxaan kaga hadli doonnaa isbeddellada ugu sarreeya ee software tafaariiqda ah. Annaga oo aan sugin wax badan, aan u dhaqaaqno xagga isbeddellada.
Payment Options Boorsooyinka dhijitaalka ah iyo irridaha lacag bixinta ee kala duwan waxay ku daraan dabacsanaanta lacag bixinta onlaynka ah. Dukaanleydu waxay helaan hab sahlan oo ammaan ah si ay ula kulmaan shuruudaha lacag bixinta ee macaamiisha. Hababka dhaqameedka, kaliya lacag caddaan ah ayaa loo oggol yahay habka lacag-bixinta taas oo abuurtay dhibaato badan oo dayactirkeeda, markii dambe adeegsiga kaararka debit-ka iyo kaararka deynta ayaa bilaabmay taas oo ahayd mid sahlan laakiin geedi socod badan oo waqti badan qaadanaya. Wakhtiyada casriga ah dhammaan buundooyinkii way gudbeen dadkuna waxay bilaabeen inay doortaan boorsooyin dijitaal ah si ay u kaydiyaan lacagtooda una bixiyaan lacag. Tani waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo dardargelin lahaa lacag -bixinta macaamiisha isla mar ahaantaana, tafaariiqlayaashu waxay helayaan faa'iidooyinka khidmadaha macaamilka ee hooseeya.
Baraarujinta Bulshada - Macaamiishu sidoo kale waxay ka walaacsan yihiin waxqabadyada bulshada, iyo wacyigelinta ay shirkaddu samayso. Dukaanleyda ayaa cadaadis saaran si ay u fuliyaan hawlo saaxiibtinimo leh. Qaybaha meheraddu waxay go'aansadaan inay yareeyaan adeegsiga balaastikada, kiimikooyinka, maqaar, dhogorta, iyo waxyaabo kaloo badan si ay u ahaadaan kuwo ku habboon deegaanka. Qaybo ganacsi oo badan ayaa doorta baakadaha nooleyn kara si ay u caawiyaan dabeecadda.
Falanqaynta Saadaalinta -Warshadaha tafaariiqdu waxay la shaqeeyaan xog fara badan waxayna noqdeen xog-wadeen. Xogta mustaqbalka ee la qiyaasey waxay ka caawin kartaa ganacsiyada inay gaaraan go'aamo xariif ah oo ay ku falanqeeyaan aagag kala duwan sida dhaqdhaqaaqa iibsiga iyo warbixinnada, habdhaqanka macaamilka, isbeddellada, iyo falanqaynta socdaalkooda. Qaababka habdhaqanka macaamilka iyo waxqabadyadu waxay gacan ka geysan karaan yareynta alaabta aan la iibsan iyo kor u qaadista iibka kale iyadoo la fiirinayo dookhyada iyo danaha macaamilka. Qaababka qiima dhimista ee alaab -qeybiyeyaasha sidoo kale waa la fahmi karaa oo wax -iibsiyada si habboon ayaa loo samayn karaa si loo helo dalabka ugu fiican.
Codsiyada Web -Codsiyada ku saleysan biraawsarka goob-ku-barashada uma baahna soo-dejimaha dalabka moobiilka waana xal weyn maadaama ay bixiyaan faa'iidooyin badan oo kala duwan sida casriyeyn fudud, taageero saldhig oo la mid ah, qaab-dhismeed saaxiibtinimo, jawaab-celin aad u sarreeya, uma baahna tayo sare intarneedka, mid walba waxaa si sahlan u adeegsada matoorada raadinta waxayna sidoo kale taageeraan ogeysiisyada.
Sirdoonka Artificial - Farriimaha caqliga leh iyo robotsku waxay caawiyaan meheradaha iyagoo kaydinaya dhammaan xogta maaliyadeed iyo nidaamyadani waxay awood u leeyihiin inay bixiyaan talooyin shaqsiyeed, helidda alaab sax ah, marin fudud, doorbidista macmiilka, iyo waxyaabo kaloo badan.
Caawinta Codka -Macaamiishu waxay adeegsadaan kaaliyayaasha codka safarkooda dukaamaysiga iyagoo adeegsanaya Amazon Alexa, google google, Siri iyo qaar kaloo badan sida saaxiibbada baabuurka dhexdiisa ah iyo caawiyayaasha guriga. Tafaariiqleyaashu waxay doorbidaan farsamadan iyo raadinta codka ku salaysan tafaariiqda. Caawiyayaasha codka ayaa u muuqda kuwo la isku haleyn karo maadaama ay yihiin kuwo dhaqso badan oo si fudud loo heli karo iyagoo bixinaya hab gacmo-la'aan ah oo lagu shaqeeyo. Tani waxay sidoo kale la imaanaysaa xadeynta dhibka ee jiilka natiijada raadinta, daalacashada adag sababtoo ah liiska weyn ee natiijooyinka raadinta iyo dhowr kale.
Raadinta Alaabada - Dukaanleydu had iyo jeer waxay u baahan yihiin inay si wada jir ah u maareeyaan waxqabadyo badan waxayna u baahan yihiin qalab maareyn iyo astaamo aad u badan si ay u maareeyaan oo ula socdaan alaabada. Astaamaha ugu dambeeyay ee laga heli karo softiweerka tafaariiqda waxaa ka mid ah silsiladaha sahayda otomaatiga ah, nidaamyada maareynta, saadaalinta iibka, ogaanshaha shayga kaydka, falanqaynta waqtiga-dhabta ah, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaas oo dhami waxay kaa caawin karaan inay yareeyaan culeyska badan ee tafaariiqleyaasha iyagoo maareynaya waxqabadyo badan intarneedka.
Raadinta Muuqaalka - Raadinta muuqaalku waa mid ka mid ah fursadaha ganacsi ee sii kordhaya ee la soo bandhigay waqtiyadii ugu dambeeyay. Raadinta muuqaalku waxay u oggolaanaysaa adeegsadayaasha inay si fudud u helaan alaabtii ay raadinayeen tan iyo muddo dheer. Tani waxay u keentaa adeegsadayaasha inay u soo dhowaadaan iibsashada maadaama natiijooyinka raadintu ay si fiican ugu habboon yihiin shuruudahooda.
Kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah isbeddellada ugu sarreeya ee softiweerka tafaariiqda iyo isbeddellada teknolojiyadda iyo cusboonaysiinta, isbeddello badan ayaa si joogto ah loogu daraa warshadaha. Liiska tiknoolojiyada software tafaariiqda ee ugu sarreeya oo lagu qiimeeyo, ka eeg Techimply.
Software -ka Tafaariiqda
Tags: codsiyada ku salaysan daalacashadadaba galka alaabadadoorashooyinka bixintafalanqaynta saadaalintatafaariiqdatafaariiqda aisoftware tafaariiqdaisbeddellada software tafaariiqdaisbeddellada tiknoolajiyada tafaariiqdaisbeddellada tafaariiqdawacyiga bulshadaraadinta muuqaalkacaawinta codkacodsiyada webka